India: Tejashwi Yadav Mocks Nitish Kumar for Not Taking Out JD (U) Manifesto Pamberi Pakupedzisira Mushandirapamwe | India News - TELES RELAY
HOME » pasi rose India: Tejashwi Yadav Mocks Nitish Kumar for Not Taking Out JD (U) Manifesto Pamberi Pakupedzisira Mushandirapamwe | India News
India: Tejashwi Yadav Mocks Nitish Kumar for Not Taking Out JD (U) Manifesto Pamberi Pakupedzisira Mushandirapamwe | India News
Patna: Kunyange kugumisa sarudzo kuti rechinomwe uye chokupedzisira. Lok Sabha sarudzo, mutungamiriri RJD, Tejashwi Prasad Yadav, rave zvakare achigumburwa purezidhendi JD (U) Nitish Kumar nokuti haasi kusiya chikamu chake. manifesto yemutambo kusvikira zuva rokupedzisira remushandirapamwe wemusarudzo.
"Chacha (baba), usatya BJP. Ndichaona vatungamiri veBJP kana vachikuudza "chimwe chinhu". Ndapota, tora manzwiro ako kunyanya pazuva rokupedzisira remushandirapamwe wekusarudza, "akadaro Tejashwi muchitatimendi.
Iko kwekutanga kokutanga kubva pakasikwa kwayo 30 October 2003 kuti JD (U) akapikisa kusarudzwa pasina maonesheni. Kunyange zvazvo vashandi vake vaviri veNADA, BJP neLJP vakabuda nemashiripiti avo akasiyana.
JD (U) iri kukwikwidza kusarudzwa kwemazuva ano muLok Sabha pane zvigaro zvese zve23 munyika yose. Iye kukakavadzana kunonyanyisa 17 nezvigaro muna Chennai, apo ainyatsoshamwaridzana nemibatanidzwa BJP uye LJP vaRami Vilas Paswan. Kunze Chennai, ari JD (U) achaita kuridza zvigaro nhatu UP, mumwe nomumwe Punjab, Manipur uye Lakshadweep hapana kubatana chero bato.
Insiders vakati JD (U) akanga atozvigadzirira manifesto yake uye pamusoro pekuzviparidzira pamhemberero muPatna. Asi bato racho rakanga rakatonhora mushure mekubatana kwayo, BJP, yakatanga kugadzirisa nyaya dzakakakavara dzakadai seRam Temple, Chisungo 370 Chinyorwa 35A uye Yakasiyana-siyana Civil Code.
Sources muna JD (U) akati kuti racho muchiuto Manifesto, bato akanga akadzivirira nzvimbo yake kare izvi anokakavara nyaya uye asarudza zvakare omerera sarudzo. Asi sezvo vatungamiri venyika yeBJP, kusanganisira mutungamiriri wehurumende Narendra Modi tanga kutaurirana pamusoro pegadziriro Hindutva pamisangano yavo yerusarudzo, JD (U) yakasarudza kusazivisa maitiro ayo nekuti yaizopesana pakati pezvipikirwa zvevhoti yevabatana vaviri.
Navo, asi National mukuru munyori JD (U) Afaque Ahmad Khan, akati, kwete kuva chikamu mubato Manifesto komiti, aisagona kutaura nayo.
Mutauriri wepaguru wenyika, KC Tyagi, haaigona kusvika pamashoko ake, pasinei nekuedza kakawanda nefoni yake.
Ita pfungwa yekusarudzwa ye Lok Sabha  ye2019 uye migumisiro ye23 May naIYO. Titevere isu kuti titevere nhau dzekupedzisira, mararamiro ehupenyu, nhepfenyuro yekuongorora uye yakadzama data analysis. Tevera mararamiro zvikwata zvechisarudzo iyo yakakura miitiro uye zvinyorwa zvinokurumidza zvakanyanya pazuva rekuverenga nehukuru hukuru hwehutano hweIndia.
paCopop, vateereri vemavhidhiyo vanoda kufungisisa nezveramangwana rebazi
Brexit : "Theresa May, c'est une femme en acier", juge Alain Duhamel – VIDEO